Warshaddii Shumaca dhalashada | Soosaarayaasha dhalashada Shiinaha iyo Soo-saareyaasha Shumaca
Shumaca Slike-4 Qiiqa Sofilaadhka ah ee Candy Slike Candy S ...
Shumaca Shumaca 3-shumac Shisheeyaha Soy Wax Travel Tin ...
Shumaca cad ee 1-Cad iyo Ivory Lavender udgoon udug ...
Keen shumac ukunta midabka jilicsan leh
Keen shumac dhalash oo dhalasho tayo sare leh oo tayo sare leh dhalasho dhalaalaya oo qurxinta
Shumaca dhalaalaya ee dhalaalaya xaashi kasta oo ay ku jiraan 10 koob oo shumac ah, waxaan sameyn karnaa dahab, qalin, casaan, dahab kacsan iyo midabo badan.
Magaca: Shumacyada dhalashada ee dhalashada dahabka dhalaalaya Shumaca cabirka: 3 * 4.6cm, cabirka sanduuqa pvc: 6 * 16.5cm Baakadaha: 460 baakadaha / kartoonnada, Shumacyada dhalashada ee dhijitaalka ah ee dahabiga waxaa laga sameeyay alaab tayo sare leh, oo aan sun lahayn iyo qiiq aan qiiq lahayn. , iyo kuwa haya shumaca dhaadheer waxay si weyn u yareyn karaan shilalka shilalka. Shumacyada dhalashada dahabka ah waa kuwa raaxo badan oo farxad ku dar xafladdaada dhalashada.
Keen qaxwaha dhalashada dhalashada kartoon dhalaalay
Magaca: Kartida dhalashada dhalashada kartoonka dhalashada shamaca Shumaca Cabbirka cabirka: 2.5 * 2.5 * 0.5cm, cabirka pvc: 8 * 10 * 2cm Baakadaha: 360-baakadaha / kartoonada, Nambarka dhalashada kartoomada dhalashada waxay leedahay noocyo kala duwan, sida Mickey, Minnie, Snow White, Seahorse Mermaid, Diinosaur iyo wixii la mid ah. Shumaca dhalashada kartoonku wuxuu adeegsadaa sanduuqa baakadaha ee PVC, sanduuq kasta wuxuu leeyahay 5 shumac yar. Waa wax aad u qurux badan in lagu qurxiyo keegga dhalashada.
Magaca: Caano rooti dhalaal qaansi roobaadka dhalaalaya oo loogu talagalay qurxinta xaflada Shumaca cabirka: 5 * 3 * 0.6cm, cabirka pvc cabirka: 7.3 * 15cm Baakadaha: 24 baakadaha / sanduuqa gudaha, 720 baakadaha / kartoonada, qaansoroobaadku waa riyada caruurnimada. Qaansoroobaadku waa ubaxu dhalinyarada. Qaansoroobaadku waa hiigsiga qof walba inuu roob helo oo caddeeyo. U oggolow shumaca dijitaalka qaanso-roobaadka inay kugula raacdo xaflad dhalasho farxad leh! !!
shumaca dhalashada weyn tirada shumaca dhalashada ee xafladda
Magaca: Nambarka weyn ee dhalashada dhalashada shumaca xaflada Shumaca cabirka: 3.2 * 5.2cm, cabirka sanduuqa pvc: 9.5 * 4.5 * 1.5cm Baakadaha: 720pcs / kartoon, cabbirka kartoonka ： 52 * 34 * 43cm Nambarka tirada weyn ee shumaca dhalashada ayaa adeegsanaya. Sanduuqa baakada ee PVC, shumacyo bir ah oo dhalaalaya oo shumac qurxoon leh oo leh taaj quruxsan. Shumaca dhalashada wuxuu adeegsadaa daabacaadda mashiinka iyo borotokoolka budada. Qaabku waa qurux badan yahay budada dahabkuna ma fududa in la dhaco. Waa shumac dhalasho oo aad u qurux badan, oo ku dari kara hodan qurux badan oo deegaanka ah ...
shumaca beeswax, shumac shukulaato, shumaca codka, shumaca beeswax, shumaca tiirka beeswax, Shumacyada codka codka beeswax,